Njengoba Udlame Luhlala EMyanmar, Umkhakha Wokukhiqiza Ingubo ongu- $ 6 Billion Ulengela Esilinganisweni
"Indawo yokushisa" yokwenziwa kwezingubo nezicathulo, ukuthunyelwa kwamanye amazwe eMyanmar kukhuphukile kule minyaka eyishumi edlule, izwe laseNingizimu-mpumalanga ye-Asia liziqhayisa ngokukhula minyaka yonke kwamaphesenti angama-57 ezimpahla ezithengiselwa amazwe angaphandle phakathi kuka-2015 no-2019, nochwepheshe abathi izwe lizothekelisa amaRandi ayishumi izigidigidi zama g ...
Inkampani yethu itholakala eNanchang County, Jiangxi
Inkampani yethu itholakala eNanchang County, esifundazweni saseJiangxi, ikakhulukazi ebandakanyeka ezikibheni ezahlukahlukene, i-POLO, uchungechunge lwejezi, uchungechunge lokugqoka kwezingane, uchungechunge lwevesti. Imikhiqizo yethu ihlanganisa umhlaba wonke futhi ithengiswa kakhulu eYurophu naseMelika.Sinomlando weminyaka engama-25 futhi ...
Mhlawumbe sizohambela umbukiso ngoMeyi, 2021.
Mhlawumbe sizoya kulo mbukiso ngoMeyi, 2021. Isikhathi sizokutshela nge-E-mail uma uthanda ukunaka .Oku-couse, siyakwamukela ngokufudumele ukuthi uvakashele. Njengomhlinzeki ovamile e-canton fair, siya e-canton fair kusukela ku-114, kabili ngonyaka, njalo ngoMeyi nango-Okthoba edolobheni laseGuangzhou. On the fair, thina ...
Imboni yezingubo iyaziziba isimo sabasebenzi bayo
Ubhadane lwe-COVID-19 lwaletha ukuba sengozini okukhulu kwabasebenza ngezingubo, njengoba izinhlobo zezingubo zaziphendula enkingeni yezomnotho eyabangelwa yilesi simo esiphuthumayo sezempilo somphakathi ngokusika ama-oda nokwenqaba ukukhokhela labo asebevele bekhiqiza. Umphumela ube ngumsebenzi omningi lo ...
Izikibha njengamanje ziyizinto ezithandwayo zemfashini
Izikibha njengamanje ziyizinto ezithandwayo zemfashini. Ziyinto evamile, elula futhi eshibhile. Zifunwa ngumphakathi. Ngakho-ke mangaki ama-T-shirts asemakethe, futhi lapho abangane bebuthana bedla, amabala aconsela ezingutsheni. Ungazihlanza kanjani? 1. Jika isikibha ngaphambi kokuwasha, ukuze ...
Ikheli:Igumbi 623 dahugongguan, umgwaqo zhenxing, nanchang, jiangxi, china